Saturday November 18, 2017 - 10:07:15 in Wararka by Super Admin
Francisco Madeira oo ah wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa kulan ka dhacay saldhigga AMISOM ee deegaanka Amabareeso duleedka Baraawe ka sheegay in socdaalkan uu qeyb ka yahay qorshe ladoonayo in lagu qiimeeyo magaalooyinka ay isaga bixi doonaan ciidamada AMISOM.
"Qorshan wuxuu qeyb ka yahay dadaallo qiimeyn ah oo ladoonayo in Ciidamada AMISOM ay uga baxaan magaalooyin waaweyn oo dhaca Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya waxayna amniga dalka ku wareejin doonaan ciidanka Qaranka dowladda Soomaaliya" sidaas waxaa yiri Francisco Mederia.
Michael Keating oo ah Madaxa Howlgalka Q.Midoobe ee Soomaaliya oo isna Baraawe tagay ayaa sheegay in ay qiimeeyeen xaaladda dhabta ah ee magaaladan kajirta.
R/wasaare Xasan Cali Kheyre,saraakiil Caddaan ah iyo Shariif Sakiin ayaa sidoo kale kalimado ka jeediyay booqashadii saldhigga Ambareeso.
Taliye ku xigeenka ciidamada AMISOM oo mas'uuliyiinta kusoo dhoweeyay socdaalka qiimeynta ah ee Baraawe ayaa ciidamada Uganda ee Sh/Hoose ka howlgala ku tilmaamay kuwa la kulmaya khataro uga imaanaya ciidamada Shabaabul Mujaahidiin.
Dad badan ayaa aaminsan in ciidamada shisheeye ay waqti aan dheereyn ka bixi doonaan laba magaalo oo katirsan Sh/Hoose islamarkaana socdaalka mas'uuliyiintan uu yahay mid ay qiil ugu yeelayaan dib ugurashadooda si aysan unoqon Kedis lama filaan ah.
Ciidamada Uganda ee Baraawe ku sugan ayaa marwalba dhimasho/dhaawac iyo Burbur gaadiid u hura sidii ay saad ugu gudubsan lahaayeen laamiga dheer ee xiriiriya Muqdisho iyo Kismaayo.
Haba yaraatee majiro wax hadaf ah oo ciidamada Qoryooley iyo Baraawe ku sugan ay xaqiijiyeen oo aan ka aheyn difaacashada saldhigyadooda taas ayaana keentay in laga fikiro sii joogista magaalooyinkaas.
Hoos Ka Daawo sawirrada socdaalka Wafdiga qiimeynta u tagay Baraawe.